बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट को बन्दैछ मुख्यमन्त्री ? « Ok Janata Newsportal
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट को बन्दैछ मुख्यमन्त्री ?
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेकपामा देखिएको विभाजनसँगै सक्रिय बनेको छ ।
नेकपा दुई पक्षमा विभाजित भएपछि भागबण्डामा आएको विभाजनमाथि कांग्रेसले पनि चाखे थाप्ने भएको छ । यतिबेला कांग्रेसलाई आफूले मागेको कुरा पूरा गर्न केही सहज देखिएको छ ।
नेकपाको ओली पक्ष कमजोर भएको प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको सहमतिपछि मात्रै सरकार बन्ने देखिएको छ । कांग्रेसले ओली पक्ष वा दाहाल–नेपाल पक्षलाई प्रदेश सरकारमा सहयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल चलाएको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई समर्थन गरेर बागमती प्रदेशमा आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । तर, त्यसमा सहमति भने भइसकेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर बागमती प्रदेशमा आफ्नो मुख्यमन्त्री बनाउने लबिङ गरिरहेका छन् । तर, रामचन्द्र पौडेल पक्षले त्यसमा सहमति गरिसकेको छैन ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश नं १ र वाग्मतीका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा बनाउन छलफल प्रारम्भ गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका पार्टी केन्द्रीय सदस्यसँग सो प्रदेशका सम्बन्धमा रायसुझाव लिएका छन् ।